PowerHouse VFX Continues Breakthrough First Year with M. Night Shyamalan’s “GLASS” – NAB Show News by Broadcast Beat, Official Broadcaster of NAB Show – NAB Show LIVE
Home » အသားပေး » အင်အားကြီး VFX အမ်ည Shyamalan ရဲ့ "မျက်မှန်" နဲ့အောင်မြင်မှုများပထမဦးစွာတစ်နှစ်တာ Continues
အင်အားကြီး VFX အမ်ည Shyamalan ရဲ့ "မျက်မှန်" နဲ့အောင်မြင်မှုများပထမဦးစွာတစ်နှစ်တာ Continues
NEW YORK- အင်အားကြီး VFX, နယူးယောက်အခြေစိုက် Boutique VFX စတူဒီယို, အမ်ည Shyamalan ရဲ့အပေါ်ဝါးအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုရောင်းချသူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်၎င်း၏ပထမနှစ်တွင်အထဲကဝိုင်း မျက်မှန်။ ဇန်နဝါရီလ 18, 2019 ပေါ်တွင်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် မျက်မှန် အင်အားကြီးရဲ့အကောင်းဆုံး-In-class ကိုခွက်တဆယ်နှင့်ဟာအဲဒီအ client ကိုဆက်ဆံရေးများအတွက်ဟန်ပြဖြစ်ပါတယ်။
post ကိုန်ဆောင်မှုမှခှနျအား Sixteen2017 ၏ကျောင်းအုပ်, ယောနသန်သည်ဟော့ဖ်မန်းနှင့် Pete Conlin နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ဝါရင့် VFX အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူဘော့ Lowery နှင့် Sr; VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူး Ed က Mendez အားဖြင့် 19 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အင်အားကြီးအလျင်အမြန်ဖြစ်လာသည်သော Full-service ကိုချဉ်းကပ်နှင့်အတူ Shyamalan နဲ့သူ့အဖွဲ့ပေးအပ် စက်မှုလုပ်ငန်းဖြတ်ပြီးကုမ္ပဏီ၏ခေါ်ဆိုမှုကဒ်။
အင်အားကြီးသူရဲကောင်း CG ဇာတ်ကောင်ကာတွန်းအလုပ်, အဆောက်အဦးများနှင့်ကားများအပါအဝင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် set ကို extensions တွေကိုမှသူတို့အတွက်ယခင်ကလုပ်ခဲ့ထက် သာ. များသောမြင်ကွင်းများဘဝမှသားရဲဆောင်ခဲ့အထိခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 300 ရိုက်ချက်များပြီးစီး ကွဲ။ ကျြမှောကျခတျေစူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်တွေအတော်များများနဲ့မတူတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်အများစုသတိမပြုမိသွားပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကလမ်းပိုနှစ်သက်ဒါညနဲ့သူ့အဖွဲ့ပါဘူး။
"Ed ကနဲ့ Bob ငါ၏အရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများစွာအပေါ်ဖန်တီးမှုမိတ်ဖက်ယုံကြည်စိတ်ချ, ဒါကြောင့်မိမိတို့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်ဖို့ရဲရင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အခါ, နောက်တဖန်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မ brainer ဖြစ်လာခဲ့သည်ပြီ," Shyamalan ကဆိုသည်။ "ဂရိတ်အလုပ်နှင့်ခိုင်ခံ့သော, ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်ဆံရေးကိုငါ့ပူးပေါင်းရွေးချယ်ရာတွင်အတွက်အကြှနျုပျအဘို့အညီအမျှအရေးကြီးသောအချက်များဖြစ်ကြသည်။ ငါဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနာဂတ်မှာအတူတကွပိုပြီးအလုပ်လုပျနိုငျအင်အားကြီးကြီးထွားမြင်နေမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အကြံထမြောက်ရသောအ။ "
"ကျွန်တော်တို့ဟာအများဆုံး VFX ဆိုင်များထက်ဝန်ဆောင်မှု၏တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအဆင့်အထိပူဇော်ချင်ပါတယ်ယုံကြည်စိတ်ချသောကြောင့်ငါတို့သည်ဤကုမ္ပဏီကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး," Lowery ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့က get-go ကျနော်တို့ကသူတို့ရူပါရုံကိုထောက်ပံ့နေတဲ့သေချာအောင်မှ clients များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အတိုင်းရှုပ်ထွေးပြီးရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့စီမံကိနျးအတှကျဝါး VFX ရောင်းချသူအဖြစ်အမှုဆောင်ခြင်း မျက်မှန် ကြောင်းချဉ်းကပ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းပြသ - ။ သငျသညျသာတစ်နှစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားအထူးသဖြင့်သောအခါ "
"ကျနော်တို့တစ်နှစ်တပေါ်ယူဆောင်သွားပါပြီပါရမီအမြင်အာရုံဇာတ်လမ်းတွေ၏နက်ရှိုင်းသောတန်းစီဇယားသည့်နည်းပညာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုစိန်ခေါ်မှုများမှထမြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enabled မျက်မှန် စုပေါင်း. "Mendez ကဆိုပါတယ်။ "အဲဒီနှင့်ကျွန်တော်ညနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာစိုက်ပျိုးပါတယ်ဆက်ဆံရေးအကြား, ကသဘာဝမထိုက်မတန်ခဲ့ - ။ ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်မယ့်ပိုပြီးအများအပြားစီမံကိန်းများအပေါ်ထပ်ဖွစိတ်လှုပ်ရှားနေတ"
ဆောင်ကြဉ်းကကူညီပေးခဲ့သောအင်အားကြီးအသင်း မျက်မှန် ဘဝမှ CG / VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူးဒန် Bornstein, ကုမ္ပဏီ၏ပထမဦးဆုံးနှစျတှငျ VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူးရုဗင် Rodas, အထွေထွေမန်နေဂျာခရစ် Kenneally နှင့် Sr; VFX ထုတ်လုပ်သူရိုင်ယန်ဟမ်နဲ့တူထိပ်တန်းထစ်အခွက်တဆယ်ထည့်သွင်းရန်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်စားပွဲပေါ်မှာမှ ILM, ထိုးဆင်း, ကဖေး FX နှင့် Zoic ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီတွေကထံမှအတွေ့အကြုံဆယ်စုနှစ်ဆောင်တတ်၏, လေးဆယ်အနုပညာရှင်နှင့်ရေတွက်၏အုပ်စုတစုစေပါတယ်။
အင်အားကြီးခွက်တဆယ်၏ဤကျယ်ပြန့်အခြေစိုက်စခန်းကိုတိုးပွားရန်သိသာသောမြို့တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ချယ်လ်ဆီး, New York မှာ Sixteen5,000 ရဲ့ State-Of-The-Art ဌာနချုပ်မှာ 19 စတုရန်းပေသိမ်းပိုက်
မျက်မှန် 2018 အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်အင်အားကြီးရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်အကူအညီပေးခဲ့ကြပြီသဲစီမံကိန်းများကိုတစ်ဦး string ကိုအတွက်ပဲလတ်တလောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနှင့်တူဇာတ်ကားရန်၎င်း၏ပြောင်းလဲနေသော, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုချဉ်းကပ်မှုယူဆောင် မေရီအား POPPINS Return, တိတ်ဆိတ်တဲ့ PLACE သို့နှင့် ညကျောင်းနှင့်တီဗီရှိုးများကဲ့သို့ အံ့ဖွယ် Mrs ။ MAISEL နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံကွန်ယက်ရဲ့ ထုတ်ပယ်သန့်စင်။
အရေးပါသောဖန်တီးမှုမိတ်ဖက်အဖြစ်အင်အားကြီးရဲ့ကြီးထွားလာဂုဏ်သတင်း Sixteen19 နှင့်အတူ၎င်း၏မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။ အဆုံးစွန်သောရှည်လျားရုပ်ပုံပြီးတဆင့်နေ့စဉ်သတင်းစာများအနေဖြင့်နယူးယောက်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးအိမ်များတစ်ဦးအဖြစ်လူသိများခဲ့ပြီးနေစဉ်, အင်အားကြီးသည့်ပဟေဠိတစ်ခုပျောက်ဆုံးအပိုင်းအစပေးပါသည်။ တဦးတည်းအိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာ post ကိုနှင့် VFX န်ဆောင်မှုတစ်ခုက start-to-finish ကို suite ကို - အတူတကွ, ကုမ္ပဏီများ client များအတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြေရှင်းချက်ပေးပါတယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက 215-284-9949 သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခေါ်ပါ www.powerhousevfx.com.
ညဥ့် Shyamalan သည်သူ၏ standout မူရင်း-2000 ရဲ့နှစျယောကျ၏ဇာတ်လမ်းများကိုအတူတကွဆောင်တတ်၏ ခိုငျမွဲ, မှတ်ကျောက်နှင့် 2016 ကနေရဲ့ ကွဲ, Universal-in ကိုတဦးတည်းပေါက်ကွဲ, All-သစ်ကိုရုပ်ပြ-စာအုပ်သည်းထိတ်ရင်ဖိုထံမှ: ဖန်.
မှ ခိုငျမွဲမိမိအကလောင်အမည်မစ္စတာ Glass ကိုအားဖြင့်လည်းလူသိများသည်ဧလိယစျေးအဖြစ် Samuel L. Jackson လည်း, မအဖြစ်, Bruce Willis ဒါဝိဒ်သည် Dunn အဖြစ်ပြန်လည်ရောက်ရှိ။ ကနေလာရောက်ပူးပေါင်း ကွဲ ကီဗင် Wendell အစအနများနှင့်အတွင်းနေထိုင်သူအများအပြားအထောက်အထားတွေကိုနှင့်ကက်ဆေးထမင်းချက်အဖြစ် Anya တေလာ-ရွှင်လန်းက The Beast နဲ့တှေ့ဆုံဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့တစ်ခုတည်းသောသုံ့ပန်းအဖြစ်သူ၏အခန်းကဏ္ဍ reprising ဂျိမ်းစ် McAvoy ဖြစ်ကြသည်။
၏နိဂုံးတွင်အောက်ပါ ကွဲ, ဖန် စျေး၏နေရာ၌ရှေ့မှောက်တွင်နှစ်ဦးစလုံးလူတို့အားဝေဖန်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရရှိထားသူသူ orchestral အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာစဉ် Dunn မြင့်တက်တွေ့ဆုံတဲ့စီးရီးအတွက်သားရဲ၏အစအနရဲ့လူစွမ်းကောင်းပုံလိုက်ရှာတွေ့။
အဆိုပါ All-ကြယ်သွန်းကြသည်လာရောက်ပူးပေါင်း ခိုငျမွဲ'' s ကို Spencer Clark ကနှင့် Charlayne Woodard, Dunn ရဲ့သားနဲ့စျေး၏မိခင်အဖြစ်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍ reprise တဲ့သူအဖြစ်ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုကိုဆုရစာရာပေါ်လ်ဆန် (ဆက်ဆံပြီးအမေရိကန်ထိတ်လန့ပုံပြင် စီးရီး)။
မိမိအကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Blockbuster ၏ဤ riveting ခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးလည်း Universal များအတွက်စာရေးဆရာ / ဒါရိုက်တာရဲ့ယခင်နှစ်ခုရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူကို Shyamalan နှင့် Blumhouse ထုတ်လုပ်မှုရဲ့ Jason Blum ကထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကသူကိုအလုပ်အမှုဆောင်အသီးအနှံ Ashwin Rajan နှင့်မာ့ခ် Bienstock နှင့်စတီဗင် Schneider နဲ့ Kevin Frakes နှင့်အတူနောက်တဖန်ထုတ်လုပ်ရန်။ ဂယ်ရီဘာဘာနှင့်ရော်ဂျာ Birnbaum လည်းအလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ဝတ်ပြုကြလော့။
ကန်း Edge ရုပ်ပုံများနှင့် Blumhouse ထုတ်လုပ်မှု, ဖန် မြောက်အမေရိက Universal Pictures ကပြည်ပမှာ buena Vista က International ကဖြန့်ချိသည်။ www.glassmovie.com
စက်တင်ဘာလအစည်းအဝေးတွင်တစ်ခွင်အရောင်အစအဆုံးအကုန်ဖို့ေူပာင်းလဲရေးနေရပ်လိပ်စာမှ SMPTE ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မ - သြဂုတ်လ 21, 2019
Francesca ပျော့တစ် VFX အဆိုတော်အဖြစ်အောင်မြင်အလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်ရန်မှ RSP ပညာရေးမှာသင်တန်းအသုံးပြု - သြဂုတ်လ 19, 2019
လူသတ်သမား Sonic ဘိ Records ကိုစတင်ရန်မှ Composer Sebastian Robertson ကအတူအပေါင်းအဖေါ်များသီချင်းများ - သြဂုတ်လ 15, 2019
ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် Visual Effects	2019-01-25
ယခင်: ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်နှင့် Editor ကို